ट्रकको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार दुई युवकको मृत्यु
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत दाङको लमही–भालुबाङ सडक खण्डको पिपरीमा सोमवार बेलुका ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिदां दुई युवाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा जिल्लाको रा ३ प २०६१ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार घोराही उपमहानरपालिका वडा नं. १५ निवासी २६ वर्षीय बालकृष्ण भण्डारी र चालक लमही नगरपालिका वडा नं. ४ निवासी २७ वर्षीय विनायक चौधरी रहेको ईलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङले जानकारी दिएको छ । गम्भीर घाइते दुबै जनालाई लमही अस्पताल पुर्याए लगतै चिकित्सकले मृत घोषित गरेका थिए ।
सोमवार बेलुका सवा ७ बजेतिर उक्त दुर्घटना भएको थियो भने दुबैजनालाई अस्पताल पुर्याए लगत्तै बेलुका पौने ९ बजेतिर उनीहरुको मृत्यु भएको थियो । सुरुमा भालुवाङवाट पश्चिम लमही तर्फ आउँदै गरेको लु १९ प ५५०६ नम्बरको मोटरसाइकल र लमहीवाट पूर्व भालुवाङ तर्फ जाँदै गरेको रा ३ प २०६१ नम्बरको मोटरसाइकल एक आपसमा ठोक्किएका थिए ।
ईलाका प्रहरी कार्यालयका भालुवाङका अनुसार दुर्घटनामा परेका दुई मोटरसाइकललाई ठक्कर दिने ट्रक राजमार्गदेखि एक किलोमिटर टाढाको भित्री सडकमा भेटिएको छ। ट्रक भेटिए चालक भने फरार रहेका छन् । चालकको खोजी भइरहेको प्रहरीले बताएको छ ।
काठमाडौँमा भूकम्पको धक्का ✍ प्रदिप ढकाल